FIFIDIANANA - FIAROVANA NY ZON’OLOMBELONA : Notanterahina tao Toamasina ny atrikasa
Notontosaina nandritra ny roa andro tao Toamasina, ny alatsinainy sy talata 9 oktobra, tao amin’ny Espace Miou Miou Antseranam pasika ny atrikasa momba ny fametrahana fanaraha-maso ireo endriky ny tsy fanajana ny zon’olombelona mandritry ny fifidianana eto Madagasikara. 10 octobre 2018
Atrikasa andraisan’ ireo fiarahamonim-pirenena anjara. Eo koa ny mpanao gazety avy amin’ny faritra telo (Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro). Ary ny avy ao amin’ny Liberty 32, tetikasa PEV Madagascar ary ny solontenan’ireo mpisolovava, … no nanatanteraka izao atrikasa izao.
Zava-dehibe amin’ny tontolon’ny asa atrehan’izy ireo mandritra ny fifidianana izao natao izao. Ny andro voalohany no nanolorana ireo toromarika rehetra ho an’ny mpisehatra. Maro ireo endrika isehoan’ny tsy fanajana ny zon’ olombelona mandritra ny fotoam-pifidianana eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin’ izany ny fanerena safidy. Nijerena aro-faninana ireo tsy fanajana zon’olombelona ireo mba hoenti-misoroka sahady. Marihina fa tantsoroka avy amin’ny Pnud no nahafahana nanatanteraka izao atrik’asa tao Toamasina izao.
Tsy nanameloka an’i Mamy Ravatomanga ny Fitsarana Frantsay FANOSORAM-POTAKA NATAON’NY HVM (244) 18 juillet 2019 Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray ANTENIMIERAM-PIRENENA (87) 22 juillet 2019 Notanana am-ponja vonjimaika any Tsiafahy LEHILAHY IRAY NITORAKA POLISY (73) 19 juillet 2019 Nampiray ny Malagasy tsy vaky volo ny Barea KARDINALY TSARAHAZANA DESIRE (68) 16 juillet 2019 Voasambotra ilay jiolahy raindahiny tompon’antoka FANAFIHANA MPANDRAHARAHA (55) 17 juillet 2019 Enin-dahy nandroba 50 tapitrisa Ariary tamina 4x4 tra-tehaka FANAKANAN-DALANA TAO VOHEMAR (53) 19 juillet 2019